aung myo set : S2 i9100 ကို 4.1.2 နဲ့ လန်းအောင်ပြုပြင်ချင်သူများအတွက်
ပထမဆုံး Firmware ကိုအရင် Download လုပ်ပါ။
Android 4.1.2 Jelly Bean [XXLSJ].rar
Odin3_v3.04@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com (Google Drive)
Odin3 v3.04 လို့ သူကညွန်းတယ.်…
Odin ကို သူပြောတာနဲ့ပဲလုပ်ပါ….
သူက odin 1.85 ဆို 1.85 နဲ့ပဲလုပ်ပါ။
အခု odin3 v3.04 နဲ့လုပ်ရမယ်…
ဒါကတော့ odin3.v3.04 ပါပဲ
S2 i9100 ကို Download Mode ၀င်မယ်….
Volume Down + Power +home ကိုဖိနှိပ်လိုက်မယ်..
Volume up နှိပ်လိုက်ရင် ဘေးကပုံလိုဖြစ်မယ်။
com ဆိုပြီးအစမ်းရောင် လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်…
Android 4.1.2 Jelly Bean [XXLSJ].rar ကို ဖြည်လိုက်ရင်ဒီလိုပုံလေးတွေပါလိမ့်မယ်….
ပြီးရင်တော့ odin မှာ ဖိုင်တွေဖြည်ရပါ့မယ်….
PDA မှာ CODE_I9100XXLSJ.tar ကိုထည့်ပါ။
Phone မှာ MODEM_I9100XXLS6.tar ကိုထည့်လိုက်ပါ။
CSC မှာ CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1.tar ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ဒီလိုဖိုင်တွေစုံရင်တော့ Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ MMSD တွေကတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်…..
Pass လို့ပေါ်ရင်တော့ အောင်မြင်ပြီပေါ့နော်….
ဒါဆိုရင်တော့ ပြန်တက်လာရင် 4.1.2 လေးနဲ့လန်းပြီပေါ့…
Internet ကြည့်တော့ ခေါင်းစဉ်မှာလေးထောင့်တုန်းတွေပေါ်လိုက်
Zawgyi Font လေးသွင်းပေးလိုက်ပါ
S2 i9100 4.1.2 no root Font@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com (Mediafire)
S2 i9100 4.1.2 no root Font@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com (Google Drive)
S2 i9100 4.1.2 no root Font@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com (DropBox)
ပြီးရင်တော့ Zip ဖြည်လိုက်ပါ။
SD Card ထဲကို File 2ဖိုင်လုံးထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Recovery Mode ၀င်ရပါမယ်…
Volume up + Power + Home ကိုဖိနှိပ်လိုက်ပါ။
Recovery mode ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်…
Install Zip From Exteranl SD Card ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ရွေးလို့မရသူများ SD Card ပြောင်းလုပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Install Zip From SD Card ကိုထပ်ရွေးပါ။
ပြီးရင်တော့ Install Zip From Internal Storage မှာ Zawgyi_for_Android.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Reboot System Now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Posted by နည်းပညာစုစည်းမှု at 8:39 AM